दु’र्घटना ज्यान गु’माएकि अभिनेत्री महिमा सिलवाल ‘इन्गेजमेन्ट’का लागि चितवन जाँदै थिइन्! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दु’र्घटना ज्यान गु’माएकि अभिनेत्री महिमा सिलवाल ‘इन्गेजमेन्ट’का लागि चितवन जाँदै थिइन्!
admin February 13, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौं, बुधबार साँझ स्कुटी दु’र्घटना हुँदा अभिनेत्री तथा मोडल महिमा सिलवाल र उनकी दिदी शर्मिला सिलवालको नि’धन भएको छ ।गजुरी गाउँपालिका–२ चाम्बासस्थित पृथ्वीलोकमार्गमा भैरहवाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लु२ख १३५ नम्बरको बसले चितवनतर्फ जाँदै महिमा र शर्मिला सवार बा९८प ७०५८ नम्बरको स्कुटरलाई ठ’क्कर दिएको थियो । दु र्घटनामा ग’म्भीर घा’इते भएपछि उपचारका लागि प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरी पठाइएका थियो ।
तर घा’इते महिमाको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको थियो भने घा’इते शर्मिलाको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टर उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१३ गीतानगर निवासी शर्मिला र महिमा घर जाँदै थिए । चितवन जिल्लामा बहिनीको ‘इन्गेजमेन्ट’मा जाँदै गदौ दु’र्घटना भएको थियो ।
फुच्चे पल देख्दा हाँसेर मुर्छा परिन् पूजा (भिडियो)
पूजा शर्मा र पल शाह अभिनित चलचित्र ‘म यस्तो गित गाउछु २’ को आज ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरले दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ । ट्रेलरमा फुच्चे पल शाहलाई समेत देख्न सकिन्छ जसको चर्चा अहिले सामाजिक संजालमा चलिरहेको छ । फुच्चे पल शाहलाई देख्दा पूजा र पललाई कस्तो लाग्यो भन्दा पूजा शर्मा हाँसेर मुर्छा परेको सुनाईन । “मैले पहिलो चोटी हेर्दा म हाँसेर मुर्छा नै परेको थिएँ । दर्शकले कत्तिको रुचाइदिनु हुन्छ भन्ने चाहि थाहा थिएन तर पललाई त्यस्तो देख्दा म हाँसेको हाँसै भएको थिएँ ।”
पल शाह भने आफुले आफ्नो बाल्यकाल सम्झेको भन्दै जवाफ दिएका छन् । पल शाहले भने, “मलाई आफ्नो बाल्यकालको सम्झना आएको थियो । म जन्मिदा त्यस्तै त थिएँ र त्यस्तो अवस्थामा देख्दा मलाई आफ्नो बाल्यकालको सम्झना आएको थियो । दर्शकले पनि रुचाइदिनु हुन्छ होला फुच्चे पललाई भन्ने आशा रहेको छ ।”
सलाम छ! यी इमान्दार रिक्साचालक, जसले रिक्सामा छुटेको लाखौं रकम फिर्ता गरे